မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရည်အသွေးပြည့်ဝသောဝန်ထမ်းများကို ရှာပါ။ ﻿
ဈေး နှုန်း စာ ရင်း
CV များကို ရှာပါ။
Affiliate အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပါ။
၀င်ပါ / ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ခြင်း
JobsInYangon အွန်လိုင်းတွင် ဝန်ထမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့် အလုပ်ရှင်များအတွက် အလုပ်တင်ခြင်း
အလုပ်များကို တင်ပါ သို့မဟုတ် Online တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော CV ကို ရှာပါ။
Myanmar's #1 Professional Job Site
Easily manage your applications online.
ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုနေသော အလုပ်ရှင်များ
LinkedIn Roger Quest account
CV Database ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
မှန်ကန်သော လျှောက်လွှာရှင်များကို ရရှိဖို့ စောင့်မနေပါနှင့်။ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လျှောက်လွှာရှင် ၃ သောင်းကျော်ရှိသည့်အပြင် လစဉ်လက်ခံရရှိနေသည့် လျှောက်လွှာရှင် ၁၅၀၀ ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော talent pool ကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အခွင့်အရေးကို ရယူလိုက်ပါ။ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်းအပြင် ကျွန်တော်တို့၏ CV Database ထဲရှိ CV များကိုပါ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊တို့ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းခန့်သူများ ( recruiters) များ၏ လုပ်အပ်ချက်များ များလာသည့်ကို စဉ်းစား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြို့ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အလိုက် နေရာဒေသကိုအခြေခံပြီး ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်လည်း ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အလုပ်ခေါ်သူများ အနေဖြင့် CV Database ထဲသို့ ၀င်ရောက်၍ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကို (နာမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှ လွဲ၍)အစအဆုံးဖတ်ရှုနိုင်သည်။ လူကြီးမင်းကြိုက်၍ရွေးချယ်သော ကိုယ်ရေးအကျဉ်း (CV) အတွက်သာ ဝန်ဆောင်ခ ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းမကြိုက်ပါက ဝယ်ယူရန်မလိုပါ။ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဈေးကွက်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးလျှက်ရှိသည်။
လူကြီးမင်းသည် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်သူ ( recruiter) ဖြစ်ပြီး အသက်အပိုင်းအခြား၊ ကျား/မ၊ ဘာသာစကားစွမ်းရည် စသည့်ဖြင့် အမျိုးအစားအလိုက် ဝန်ထမ်းများရှာဖွေနေပါက လူကြီးမင်းစိတ်ကြိုက် Filter များအသုံးပြု၍ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
အခြား ကြီးမားသော Packageများအတွက် ကျွန်တော်တို့၏ အရောင်းအဖွဲ့ထံသို့ ၀၁၂၃၀၆၁၀၃ ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
CV database and job post packages
Find your perfect match easily with combined tools
Jobsinyangon ၏ အလုပ်လျှောက်သူများ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းစုဆောင်းထားမှုသည် အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံစသည့် အဓိက စကားလုံးများဖြင့် အစီအစဉ်တစ်ကျရှိသဖြင့် အင်တာဗျူးအတွက် ဘယ်လိုလျှောက်လွှာရှင်များကို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူရမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများကို ရရှိနိုင်ရန် စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားသည်။ Jobsinyangon နှင့် အလုပ်ခေါ်ယူမှုကို စတင်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Jobsinyangon ၏ မိတ်ဖက်မီဒီယာများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များမှ တဆင့်လည်း သင်၏အလုပ်ခေါ်ယူမှုကို တွေ့ရှိလျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁၀၀ % စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေရန်နှင့် CV အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်ခြင်း
It is our job to make recruitment easy for you
ဝန်ထမ်းအသစ်ရှာနေပါသလား။ Online မှ အလုပ်ခေါ်လိုပါသလား။ သင်နေရာမှန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ Jobless က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘယ်ဒေသအတွက်ကိုမဆို Online ပေါ်မှ အလုပ်ခေါ်ယူနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေပါပြီ။ အလုပ်ခေါ်ယူမှု တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် သင်ခေါ်ယူထားသည့် နေရာနှင့်ကိုက်ညီသည့် အရည်အချင်းရှိသော CV ပေါင်းများစွာကို လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ်သည်။ အလုပ်လျှောက်လွှာ အရေအတွက်သည် သင်ခေါ်ယူထားသည့် အလုပ်တစ်ခုခြင်းစီ၏ အရေအတွက်ပေါ်မူတည်မှာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်များဘက်မှ သင့်အတွက် အလုပ်ခေါ်ယူမှု အမျိုးအစား ၃ မျိုးကို ကမ်းလှမ်းထားသည်။ သာမာန်ခေါ်ဆိုမှု၊ အပတ်စဉ် ခေါ်ဆိုမှု နှင့် ထိပ်ဆုံးမှခေါ်ဆိုမှု တို့ဖြစ်သည်။
သာမာန်ခေါ်ဆိုမှု – အလုပ်စတင်ခေါ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်သည်အထိ ခေါ်ဆိုမှုစာရင်း၏ အစီအစဉ်အတိုင်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်။
အပတ်စဉ် ခေါ်ဆိုမှု– အလုပ်စတင်ခေါ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ ခေါ်ဆိုမှုစာရင်း၏ ထပ်ဆုံးသို့ အပတ်စဉ် ပြန်လည်ရောက်ရှိနေမည်။
ထိပ်ဆုံးမှခေါ်ဆိုမှု – အလုပ်စတင်ခေါ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ရက်အပြည့်ခင်အထိ သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမျိုးအစားများ၏ထိပ်ဆုံးတွင် အမြဲတမ်း ရှိနေသည့်အပြင် အထူးတလည်ဖော်ပြခြင်းကိုလည်း ခံရမည်။
Online မှ အလုပ်ခေါ်ယူမှုအတွက် လွယ်ကူစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ထားသည်။
အလုပ်ခေါ်ဆိုမှု ပုံစံ ၃ မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းလှမ်းထားသည်။
အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြ၍ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း၊ Jobsinyangon သတင်းလွှာတွင် အလုပ်ခေါ်ယူမှု၊ Facebook မှ ခေါ်ယူမှု၊ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း ဝန်ဆောင်မှု၊ တစ်ဦးချင်းလ့ကျင့်ခေါ်ယူမှုနှင့် သင်၏အလုပ်ခေါ်ယူမှုအား အထူးတလည် ဖော်ပြခြင်းစသည့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ရယူနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး အာမခံချက်ရှိသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည်။
Order any credit
1 job post one month $ 3
1 CV with contact information $ 2
Credit ကို ဝယ်ပါ။
No of employees 10-50
10 Job Posts / Month
CVs including contacts 20/month
15 Job Posts / Month
CVs including contacts 40/month
No of employees Above 100
20 Job Posts / Month
CVs including contacts 120/month
* ask our account managers for details
Not sure which option is the best? Contact us at 09421588394, 09421588435 or email us at info@jobsinyangon.com Subscription serviceသည်CVသတင်းအချက်အလက်မှလျှောက်ထားသူများ၏ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ခွင့်ပေးသည်။
I plan on using JobsInYangon much more often and for as long as I am working asarecruiter. JobsInYangon isahuge time saver. It's your own personal virtual recruiter that does the work for you while you focus on more high-level hiring activity.
Ms Htet Wai Yan Moe
Recruitment Officer of CDG Myanmar
When we compared the recruiting tools on the market, it was clear that solution by JobsInYangon provided superior functionality and usability. And on the top, it was unrivalled on price.
Ms Kyi Kyi Zin
HR Manager of FrieslandCampina
Getting our brand in front of more people and growing our candidate pool to find the right talent was essential to our success. And in this regard, social recruiting absolutely expanded our horizons. JobsInYangon has more then half millions fans and they promote our jobs really heavily. The money was really worth. One of the best features that I personally like is the saved resumes and the saved searches that you can do. I went through the candidates that were on JobsInYangon on Friday and then Monday I got email alerts of guys who uploaded their resumes or updated their resume. So it's searching while you're not at work. For us, that's money in the bank
Getting our brand in front of more people and growing our candidate pool to find the right talent was essential to our success. And in this regard, social recruiting absolutely expanded our horizons. JobsInYangon has more than half milions fans and they promote our jobs really heavily. The money was really worth.
Mrs Su Myat Wai
Advertise on largest Job Media Alliance in Myanmar
JMPA သည် လစဉ် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁.၉ သန်းကျော်ရှိသည့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဝဘ်ဆိုက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ လုပ်ငန်းကြော်ငြာများကို ဝင်ရောက်ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် အလွှာအမျိုးမျိုးမှ လူတန်းစားအမျိုးမျိုး၏ကို စွဲဆောင်လိုက်ပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင်များကို အောက်ပါ ဆိုက်များတွင်လည်းကြော်ငြာနိုင်သည်။
* If you want to join the Alliance pls call our office to arrange for meeting and iclude you to approval process(09421588394, 09421588435)
သင်၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ အရောင်အမျိုးအစားနှင့် ထုတ်ကုန်များကို သင်၏ အလုပ်ကြော်ငြာတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာပါ။